1991 Miyaa Loo Noqonayaa? Xasan Shiikh Ayaa Ka Jawaabay | Xaqiiqonews
1991 Miyaa Loo Noqonayaa? Xasan Shiikh Ayaa Ka Jawaabay
Waxaa magaalada Groowe ku soo dhamaaday shir uu soo qabanqaabiyey machadka cilmi baarista ee Heritage, waxaana shirka iskugu yimid qaar ka mid ah dhinacyada kala duwan ee siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafid.
Shirka Garoowe siyaasiyiinta ka soo qeyb galay Waxaa ka mid ahaa Xasan Shiikh Maxamuud, Shariif Sh. Axmed, Mahdi Guuleed, Xasan Cali Kheyre iyo madax kale.
Go’aanada shirka ka soo baxay ayaa waxaa ugu muhiimsanaa taageero ay dhinacyada oo dhan u muujiyeen heshiiskii doorashooyinka, waxaana dhinacyada isku raaceen in laga shaqeeyo doorasho wada ogol ah oo la isku raacsan yahay.
madaxwayne Hassan Shaikh mohammud waraysi Qosol badan 1991 ma Loonoqonaya😂 Wariyuhu Jawaab nuucee ah Ayuu sugayay
Posted by Hon Mohamed Mareeye on Saturday, January 2, 2021